Maxaad Kala Socotaa Hawlaha Shirkadda Baaxadda Weyn Ee (Fenoon Al Madinah Tech. Cont. L.L.C)? – Codka Qaranka Tanadland
Daarta quruxda badan ee calanka soomaaliyeed ka dul babanayo aqristow bal malee oo maxay kula tahay?. Hadaba aan idiin sheegee dadweynow daarta quruxda badan ee uu calanka soomaaliyeed ka dul babanayo waa safaaradda soomaaliya ee dalka Qadar. Waana safaaradda ugu quruxda badan safaaradaha soomaalidu ay ku leedahay dunida oo dhan siday aniga ilatahay. Safaaraddaas quruxda badan waxaa inoo dhisay mahadi ha ka gaartee shirkadda soomaaliyeed ee (Fenoon Al Madinah Tech. Cont. L.L.C).
Xiliga hada lagu jiro soomaaliya waa dayr barwaaqo ah abaarna waa laga soo doogey, balse jiilaalka soomalida ka haysta xirfadyarida goorta laga baxayo lama oga. Tiro yarida xirfadleyaasha soomaalidu waxay saameyn balaaran oo xun ay ku leedahay dhaqaalaha dalka. Waxaa jira mashaariic iyo wershado muhiim ah oo hadii la rabo in soomaaliya laga hirgeliyo, ay qasab noqonayso in shaqaale ajnebi ah dibeda laga keeno maadaama aan la heleyn shaqaale soomaaliyeed oo hawlahaas qibrad u leh. Taas waxaa ka siidaran rajada laga qabo in la helo shirkaddo soomaaliyeed oo qandaraas ku qaadankara inay fuliyaan mashaariicdaas.
Shirkadda (Fenoon Al Madinah Tech. Cont. L.L.C) waxaa u shaqeeya xirfadleyaal badan oo soomaali iyo ajnebi isugu jira. Shirkadda (Fenoon Al Madinah Tech. Cont. L.L.C) daaraha ay dhisto iyada ayaa qalabaysa. Waxayna qandaraasyada ay ku qaadataa naqshadaynta iyo fulinta qalabaynta daaraha. Taasoo ah waxa afka qalaad lagu yiraahdo (Mechanical Electrical Plumbing Design Services “MEP”).
Managing Director: Eng: Mohamud Hersi Jidaal
Email: fenalmad@eim.ae www.fenalmad.com
Waayihii barisamaadka ahaa ee ay dalka ka arimineysey xukuumaddii kacaanka barakaysan, soomaaliya waxaa ka jirey xirfadley aad u tiro badan. Cirfadleydaas oo ay dowladdu dhiirigelinjirtey dalkuna uu ku faanijirey. Sidaad gsoontihiin intiina badan carwada qaranka soomaaliyeed waxay ahaanjirtey meel xirfadleyaasha soomaaliyeed iyo kuwa ajnebiga ahi ay waxsoosaar kooda ku soo bandhigaan. Aalaa xirfadleyaasha soomaaliyeed waxaa dhicijirtey inay ka qaybgalaan carwooyinka wadadamada aynu saaxiibka nahay. Xirfadleyaasha soomaaliyeedna waxay dowladdii kacaanka ahayd ay u abaabushey iskaashatooyin maamul iyo hogaan leh.
Metalan, kabaha iyo boorsooyinka ay xirfadleyaasha soomaalidu ay sameeyaan aad ayey u badnaanjireen. Laakiin waayadaan danbe waxaad moodaa xirfedlayaasha soomaaliyeed inay gabaasi noqdeen. Wax hadal hayaana aysan jirin. Kaaga darane waxaad arkaysaa qof ah (Injineer), (Shaybaariiste), ama (Dhaqtar) ah oo meherad ganacsi oo aan xirfad u baahnayn shaqo ka dhigtay. Sida (Hoteel), (Maqaayad) ama (Gedisle), (Baqaarle), (Xoolo Xaraash), (Gaado) iwm.
Xiliga hada lagu jiro soomaaliya waa dayr barwaaqo ah abaarna waa laga soo doogey, balse jiilaalka soomalida ka haysta xirfadyarida goorta laga baxayo lama oga. Tiro yarida xirfadleyaasha soomaalidu waxay saameyn balaaran oo xun ay ku leedahay dhaqaalaha dalka. Waxaa jira mashaariic iyo wershado muhiim ah oo hadii la rabo in soomaaliya laga hirgeliyo, ay qasab noqonayso in shaqaale ajnebi ah dibedda laga keeno maadaama aan la heleyn shaqaale soomaaliyeed oo hawlahaas qibrad u leh. Taas waxaa ka siidaran rajada laga qabo in la helo shirkaddo soomaaliyeed oo qandaraas ku qaadankara inay fuliyaan mashaariicdaas.
Shirkadda (Fenoon Al Madinah Tech. Cont. L.L.C) :-
Shirkadda (Fenoon Al Madinah Tech. Cont. L.L.C) waa shirkad soomaaliyeed oo naadir ah. Shirkaddu mudo gaaban oo afar sano ah ayey jirtaa. Hase ahaatee mudodii gaabnayd ee ay shirkaddu jirtey waxay gaartey guulo waaweyn. Waxayna noqotay shirkadda 3 -aad ee dhismaha oo ugu weyn ee soomaalidu ay ku leedahay wadamada khaliijka. Shirkadda (Fenoon Al Madinah Tech. Cont. L.L.C) hawlaheedu waxay isugu jiraan dhismaha daaraha iyo guryaha qalabayntooda. Shirkadaha dhismaha hawlahoodu waxay ku koobanyihii dhismaha qalfoofta daaraha iyo naqshadeynta daaraha. Shirkaddaha wax dhisa mashruuc kasta oo dhisme ah waxaa ku weheliya shirkaddo kale oo qandaraasleyaal ah.
Shirkaddahaas oo mid waliba ay hawl gooni ah qaabilsantahay.Tusaale ahaa, daarta aas-aaskeeda marka la bilaabo waxaa ka wada hawl gelahaya sadex shirkaddood 1. shirkad (Fuundi) ah oo dhismaha daarta dhisaya. 2. Shirkad Tuubiiste ( Plumbing) ah oo laymanka tuubooyinka biyaha nadiifka ah iyo kuwa wasaqda qaada ay maraan xiraya. 3. Shirkad (Korontoyaqaan) ah oo laymanka dabka ee daarta xirahaya. Marka dhismaha daartu uu dhamaadana waxaa hawsha ebya shirkad (Nijaar) ah oo albaabada iyo dariishadaha ku rakibta. Waxaa iyaguna ka bar-bar shaqaynaya shirkaddii gudo-qurxinta “Interior Design Companies).
Hawlaha Shirkadda (Fenoon Al Madinah Tech. Cont. L.L.C)
Shirkadda (Fenoon Al Madinah Tech. Cont. L.L.C) waxaa u shaqeeya xirfadleyaal badan oo soomaali iyo ajnebi isugujira. Shirkadda (Fenoon Al Madinah Tech. Cont. L.L.C) daaraha ay dhisto iyada ayaa qalabaysa. Waxayna qandaraasyada ay ku qaadataa naqshadaynta iyo fulinta qalabaynta daaraha. Taas oo ah waxa afka qalaad lagu yiraahdo (Mechanical Electrical Plumbing Design Services (MEP). Hawlahaas oo isugu jira wax ala iyo wixii tuubo ku saabsan, ha ahaadaan tuubooyinka naqaska qaada, hawada neecawda ahna guriga soogeliya. Tuubooyinka wasaqda qaada ama kuwa biyaha. Taaso ay weheliso xiritaanka iyo asturidda laymanka wax alla iyo wixii koronto ku shaqeeya.
Daarta quruxda badan ee calanka soomaaliyeed ka dul babanayo aqristow bal malee oo maxay kula tahay?. Hadaba aan idiin sheegee dadweynow daarta quruxda badan ee uu calanka soomaaliyeed ka dul babanayo waa safaaradda soomaaliya ee dalka Qadar. Waana safaaradda ugu quruxda badan safaaradaha soomaalidu ay ku leedahay dunida oo dhan. Safaaraddaas quruxda badanna waxaa inoo dhisay mahadi ha ka gaartee shirkadda soomaaliyeed ee (Fenoon Al Madinah Tech. Cont. L.L.C).
Shirkadda (Fenoon Al Madinah Tech. Cont. L.L.C) waxay ku talo jirtaa mudo aan fogeyn inay magaalada (Lascanod) ay ka hirgeliso mashruuc aad u balaara hadii alle idmo. Mashruucaas oo ah dhismaha iyo qalabaynta xarunta cusub ee ay yeelandoonto (Jaamacadda Bariga Afrika) ee magaalada Lascanod.
Maxaa U Gaar Ah Shirkadda (Fenoon Al Madinah Tech. Cont. L.L.C)?.
Shirkaddaha dhismaha ee soomaalidu ma’ay laha qayb daaraha ay dhisaan qalabeeya. Laakiin shirkadda (Fenoon Al Madinah Tech. Cont. L.L.C) waa shirkadda qura shirkaddaha dhismaha ee soomaaliyeed oo leh farac u qaabilsan qalabaynta. Ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo (Mechanical Electrical Plumbing Design Services “MEP”).
Taasoo ay ugu wacantahay xirfadleyaasha u shaqeeya shirkadda (Fenoon Al Madinah Tech. Cont. L.L.C) oo ah wax ay dheertahay shirkaddaha kale ee soomaalida. Taas oo suurogelisey in shirkaddaha dhismaha soomaalida iyo kuwa ajnebiga shirkadda (Fenoon Al Madinah Tech. Cont. L.L.C) ay daaraha u qalabayso.
Hadaba sow lamagudboona ardayda soomaaliyeed inay hadaf fog yeeshaan. Marka meherad farsamo oo ay ku shaqaystaan ay yeeshaana waxaa loo baahanyahay inay shirkaddo xirfadleyaal ah ay abuuraan. Halkudheg waxaa shirkadda (Fenoon Al Madinah Tech. Cont. L.L.C) u ah “Aynu Mustaqbalka Dhisno”. Wax walbaana sidaad ogsoontihiin waxay u baahanyihiin qorshe iyo dadaal badan.
Tel: 0097165629020Fax: 0097165629211